साफ महिला च्याम्पियनसिप : विजयी शुरुवात गर्ने नेपालको योजना – Khel Dainik
साफ महिला च्याम्पियनसिप : विजयी शुरुवात गर्ने नेपालको योजना
बिराटनगर (खेलदैनिक) । प्रतिष्ठित साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि बिराटनगरमा भव्यताका साथ शुरु हुँदैछ ।
काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक आयोजना हुन गईरहेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज आयोजक नेपालले भुटानको सामना गर्दैछ । शहिद रंगशालामा दिनको ३ बजेदेखि शुरु हुने आजको खेल नेपालका लागि महत्वपूर्ण पनि छ ।
प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले शुरुवात मै समूह चरणको खेलहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताईसकेका छन् । उता कप्तान निरु थापाले पनि आफूहरु उपाधिका लागि खेल्ने समेत बताएकी छिन् ।
भुटानका प्रशिक्षकले पनि नेपाललाई बलियो र कठिन प्रतिद्वन्द्वी मानेको छ । यद्यपि यी तमाम कुराहरुका बीच पनि नेपालले अहिलेसम्म साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि भने जित्न सकेको छैन । पटक–पटक दावेदार मानिनु र फाइनलमा पुगे तापनि नेपाल सधै उपाधिबाट बञ्चित हँुदै आएको छ ।
यसपटक त्यो अतित र इतिहासलाई बिर्साउँदै उपाधि जित्ने राम्रो अवसर नेपालसँग छ । जुन कुरालाई प्रशिक्षक खड्काले पनि स्वीकारेका छन् । यद्यपि उनले प्रतियोगितामा कुनै पनि टोलीलाई हलुका रुपमा नलिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
कति होला त आजको नतिजा ? के नेपाली चलीहरुले आज बिजयी शुरुवात गर्लान त ?
← एन्फाद्वारा महिला फुटबल टोली जनही एक लाखका दरले सम्मानित साफ महिला च्याम्पियनसिप : नेपालको अग्रपंक्ति निरु र साबित्राले सम्हाल्दै →
शानदार जितका साथ एपिएफ स्कुल सेमिफाइनलमा फाल्गुन २८, २०७५
चौथो स्थानीय तह मकवानपुर गोल्डकप तेस्रो सातादेखि फाल्गुन २८, २०७५
केसीलाई राष्ट्रिय यु–२० फुटबल टोलीको जिम्मेवारी फाल्गुन २८, २०७५
उपाधिमाथि रोयलको ह्याट्रिक फाल्गुन २८, २०७५
वाल्मिकी र नेपाल राष्ट्रिय मावि सेमिफाइनलमा फाल्गुन २८, २०७५
नेपालले ओमान र टिमोर लेस्टेसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने फाल्गुन २८, २०७५